Injeniera - Torolàlana WoW | WoW Guides
Ny injeniera dia manana zavatra ilaina isan-karazany. Amboary ny fitaovam-piadianao lavitra, mamorona biby fiompinao samirery, mitaingina biby fiompy mekanika tsy manam-paharoa na mamorona trinket mahery.
Torolàlana momba ny injeniera Zandalari sy Kul Tiran - 1 ka hatramin'ny 150
Aloha! Amin'ity torolàlana Zandalari Engineering ity sy ny tsipika Kul dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny lalan-kaleha ...
Torolàlana momba ny teknika 1-800
Aloha! Amin'ity Torolàlana momba ny injeniera ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianarinay anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra mankany ...
Asa fitoriana any Legion
ny Ana Martin hace 6 taona .
Tongasoa eto amin'ny tari-dalan'ny misiona Legion Engineering. Amin'ity torolàlana ity izahay dia mitondra anao ny iraka rehetra ...
Torolàlana momba ny teknikan'ny legiona- Mahazoa ny scema rehetra
Tsara! Ny injeniera ao amin'ny Legiona toa ny sisa amin'ireo asa dia novaina tamin'ny lafiny maro na dia ...
Draenor Engineering Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Draenor Engineering izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700.
Torolàlana momba ny teknika 1-600
Ity torolàlana ity dia hampianatra anao ny fomba haingana sy mora indrindra hampitomboana ny injeniera avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 600. Havaozina ho an'ny patch 5.0.5. Ny injeniera dia atambatra tsara amin'ny harena ankibon'ny tany, raha manao izany ianao dia hitahiry volamena be dia be. Raha tsy manana harena ankibon'ny tany ianao dia tsy maintsy mividy ny zava-drehetra ao amin'ny trano fivarotana. Na dia ny fomba haingana kokoa aza dia ny mividy ny zavatra rehetra amin'ny lavanty.
Torolàlana momba ny teknika 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Asa matihanina amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Ny injeniera dia asa iray manampy singa mahafinaritra satria maro amin'ireo fomba fahandro no misy vokany tsy ampoizina. Izy io dia iray amin'ny asa lafo indrindra hihanika ary, amin'ny lafiny iray, ilay manana tombony kely indrindra, na dia manana zavatra miavaka toa azy Chopper avy amin'i mekiengineer, Jeeves na ny Masinina manidina manidina.
Ity asa ity, toa firavaka y Smithy, mifameno tsara amin'ny fitrandrahana Na dia mila fitaovana sasany avy amin'ny asa hafa ianao izay tsy maintsy azonao amin'ny lavanty raha tsy manana namana afaka manampy anao ianao.
Raha te hahay hanao gadget mahafinaritra ianao, dia amboary ny bokinao, manàna faharetana ary manaova ny reflexes alohan'ny hipoaka… ary tohizo ny famakiana!
Inona avy ireo zavatra hita 8 momba ny injeniera?
ny Wow mpitari-dalana hace 11 taona .
Miaraka amin'ny farany fanamboarana vao tsy ela tao amin'ny mpizara, somary gaga ny sasany taminay rehefa namaky ireto fanitsiana manaraka ireto:
Amin'izao fotoana izao dia misy ny fahitana injeniera valo azo ianarana amin'ny famoronana ilay crusher akoho resy amin'ny ambaratonga ambony indrindra amin'ny injeniera.
Raha vantany vao namaky ity aho dia nanandrana naka vaovao nefa tsy nisy fahombiazana. Ankehitriny, noho ny fanehoan-kevitr'i mpampiasa Wowhead, mety manana fampahalalana bebe kokoa momba ny Discoveries Engineering izahay.
Tao Cataclysm, te-hanome ny sasany amin'ny Alchemy mikasika ny asan'ny injeniera izy ireo. Nahita zavatra 8 hita fa mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny lamina, tsy mampiofana izy ireo fa kosa manana ny fahafaha-mahita azy ireo isika rehefa manamboatra entana Cataclysm Engineering. Na izany aza, nisy ny olana izay raha tsy fantatrao fotsiny ny 7 amin'ny 8 amin'ny teboka fahaizana 525 dia tsy afaka nianatra ny fahitana fahavalo.
Torolàlana momba ny injeniera 450-525
ny Potox hace 12 taona .
Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hampiseho aminao ny fomba mora indrindra hiakaranao Haavo injeniera 450-525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Injeniera manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana momba ny injeniera hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm. Ho an'ity dia tsy hampiasa afa-tsy amin'ny alàlan'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany na ividianan'ny mpivarotra izahay. Niezaka ny hampiasa fitaovana vitsivitsy araka izay tratra izahay.
Ireo fitaovana azo tamin'ny alàlan'ny harena ankibon'ny tany dia hampiasaina amin'ity boky ity.
Misy ny fomba fahandro Tanan-tànana amin'ny baoritra Obsidium (2x Bara fanodinana) izay hahafahantsika manatratra haingana ny haavo 450, noho izany dia hanomboka amin'ny ambaratonga hafa miaraka amin'izany isika.
Torolàlana momba ny teknika 1 - 450
ny Tosundelmarg hace 13 taona .
Ao amin'io Torolàlana momba ny injeniera, asehonay anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny asan'ny injenieranao amin'ny ambaratonga 1 ka hatramin'ny 450.
Ho an'ny injeniera, ny fitambarana asa tsara indrindra dia ny harena ankibon'ny tany. Raha samy mampiasa ianao dia hitahiry volamena be dia be raha ny fampiakarana ny haavon'ny maha-injeniera anao. Indrindra rehefa mila mampiasa Mithril sy Thorium ianao satria sarotra ny mahita azy ireo ary hamidy amin'ny lavanty. Azonao atao ny manaraka ny anay Torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany hanamorana ny fiakarana.
Raha tsy manana ny harena ankibon'ny tany ianao dia mila mividy fitaovana ary mila volamena be dia be. Na dia tsy lafo aza, ny fomba haingana indrindra dia ny mividy ny zavatra rehetra amin'ny Auction.